musha OCEANIA FOOTBALL STORI Mile Jedinak Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhoti Genius iyo inonyatsozivikanwa neNickname; "Nendebvu Inofanira Kutya". Our Mile Jedinak Ubwana Nhau pamwe Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda zvisingazivikanwi zvishoma nezvake pamusoro pake.
Hongu, munhu wese anoziva nezvehutungamiri hwake hune humwe asi vashomanana vanoona Bio Yedinak's Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Mile Jedinak Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Zita rake chairo ndiMichael John Jedinak. Akazvarwa pa 3rd musi waAugust 1984 mukati Sydney, Australia. Michael anobva kuCroatia achizvarwa uye nickname yake 'Mile' ndechimwe chezvinyorwa zvemashoko aya ane rudzi rwekuti ave zita rake repamutemo.
Mile yakakurira semucheche mumatope uye mumasvingo ekumadokero kumadokero eRooty Hill, Sydney nevabereki vake navanasekuru, hama nehanzvadzi. Zvechokwadi, Kana iwe unonzwisisa nzvimbo, pasi-pasi-pasi vanhu, nguva dzakaoma dzavakapfuura nayo, zvino unowana kunzwisisa kwakanzwisisika kuti Mile Jedinak akashandura sei simba rekufunga nekutsunga kuenda mberi uye kubudirira pane imwe yebhokisi guru zvikamu.
Jedinak akamboyeuka zvakare. "Vanasekuru naamai vangu vakanga vari munharaunda kuitira kuti tive nemhuri yakakura. Amai naBaba vaishanda zvakaoma. Zvichida vakazviita zvishoma, asi ini ndanga ndisingaiti yakange yakanyanyisa. Chinhu chacho ndechokuti, zvavakawana vakashanda zvakaoma kuti vawane. Izvo hazvina kuuya nyore uye ndinofungidzira zvakawanda zvandakakurira zvakabva pakushanda pane zvaungawana. Ndiri kutarisa kumashure uye ndinogona kutaura kuti kuva nezvinhu izvo zvinokura ndizvo chimwe chinhu chandinonyanya kuzvidada nacho uye zvikuru ndichionga kuvabereki vangu nenzira iyo vakandisvitsa nayo. "
Semwana, Mile akaenda kuSt Augustine Catholic High School muRooty Hill. Muchikoro kwaiva neboka rebhola. Akawira murudo nemutambo uye akaita kuti ave chido chake uye basa remangwana kubva pazera remakore. Paaiva kuchikoro, Mile akabatanidzwa uye akatungamirira boka rake kuti akunde mumakwikwi akawanda. Akakanganwa ndiye PDSSSC, makwikwi ayo aipikiswa nezvikoro zveAustralia zveKaturike.
Mushure mekuyaruka kwake, Mile yakatora bhora kune imwe yenhamba inotevera nekunyora neSydney United nokuda kwehuduku hwake. Mile yakaenderera kuva chikwata chaidiwa sezvaaipinda mudivi raro. Kuti awane ruzivo rwakawanda, akaenda kuCroatia (NK Varaždin), uye Turkey (Antalyaspor) paMaripo asati asvika kuEurope uye kwaakazove mutungamiriri weCriststal Palace uyewo rudzi rwake. Kunge Mark Viduka, kuchengetedza nyika yake zvinoreva nyika kwaari uye kune vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo
Mile Jedinak Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Muna 2010, Jedinak akaroora Natalie Peacock. Vakanga vari muukama kwenguva refu uye vane hukama hukuru kune mumwe nemumwe. Izvi zvinowanzoonekwa pazviitiko zvakasiyana siyana uye mabasa.
Mudzimai wake, Natalie Peacock ndiye aimbova muenzaniso kubva kuSydney. Vakaroorana vane mwanakomana anonzi Andre mushure mekuroora kwavo mu2010.
Mile Jedinak Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts -Upenyu hwehupenyu
Mire ine zvinyorwa zvinotevera kumunhu hwake.
Mile Jedinak Strengths: Arikusika, ane shungu, ane rupo, ane shungu-moyo, anofara, anoseka.
Mile Jedinak Matambudziko: Pane imwe nguva munguva, Mile inogona kuzvikudza uye yakasindimara.
What Mile Jedinak anoda: Zvechokwadi, anofarira kutora mazororo uye kufara neshamwari.
What Mile Jedinak haafariri: Kuregererwa, kutarisana nematambudziko echokwadi, kusabatwa semambo kana mukuru.
Muchidimbu, Mile Jedinak ndiye mutungamiri akaberekwa. Anoshamisa, akasika, anozvivimba uye ane simba.
Iye anokwanisa kuita chero chaanoda kune chero chinzvimbo chehupenyu anozviisa maari. Pasina mubvunzo, kune simba rakananga kuMire uye "nzvimbo yake yemasango".
Mile Jedinak Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Michael John anobva kumhuri yakakura uye yepakati-kati nevehama nehanzvadzi. Yaiva baba naambuya vake avo vakatanga kutama kubva kuCroatia kuenda kuAustralia panguva iyo Eastern Front War iyo senhengo yeHondo Yenyika II.
Amai vake nababa avo veCroatia venyika vakasvika kuSydney sevana uye vakakurira naambuya navanasekuru avo vakanga vasina kutaura chaizvo Chirungu. Sezvakawanda kare uye shure kwavo, vakaroora ivo pachavo, vakatenga imba yavo yekutanga uye vakaona mhuri yavo yakawanda ichiwedzera.
Mire inobva kumhuri ine maitiro anokosha. Pamberi kwebasa rekuenda kune dzimwe nyika uye tsika dzemhuri, vabereki vaMil Jedinak vakabatsira kusimbisa mitemo yakarurama muvana vavo, Mile kunyanya. Nhasi, Miles anoonekwa semunhu akagara nhaka yakanaka yehutano hwemhuri iyo inoonekwa nenzira iyo inotungamirira Socceroos Tim Cahill, Harry Kewell uye Lucas Neill akanga aita kare.
Mile Jedinak Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts -Nyaya Dzinotevera Zita Rake
Mile Jedinak akaratidza kuti zita rake chaiye ndiMichael - asi rakapfupiswa nekuda kweCroatia yefa. Jedinak akava mudiwa wevateki munguva yekutanga yeAston Villa uye akatumidzwa zita rake 'Nendebvu Inofanira Kutya' ne Villa Park vakatendeka.
Nyika yeAustralia yakaberekerwa muSydney asi inobva kumhuri yeCroatia. Anofamba nechinyorwa chezita rake, Mile - akadudzwa Me Lay.
CHOKWADI KUTI: Tinokutendai nokuverenga Mile Mile Jedinak Childhood Indaba pamwe untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe kana kuti taura nesu!